အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ ဆေးရုံ ၄ ရုံဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပြောကြား – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ ဆေးရုံ ၄ ရုံဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပြောကြား
·2weeks ago ·2 Comments
ဇန်နဝါရီ ၁၅ ၊ ၂၀၂၂
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ တိုက်နယ်ဆေးရုံတွေ၊ မြို့နယ်ဆေးရုံတွေ ဖွင့်လှစ်ထားရာမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ ဆေးရုံ ၄ ရုံ ဖွင့် လှစ်ထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ထပ်မံဖွင့်လှစ်မယ့် ဆေးရုံတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက PVTV ကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ထဲမှာ စစ်ကိုင်းမှာတစ်ရုံ၊ မကွေးမှာတစ်ရုံ၊ ကရင်နီမှ နှစ်ရုံ ဆရာတို့ တွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အခု ကရင်တို့ မွန်တို့ဘက် မှာလည်း ဆက်ပြီးတော့ ဒါတွေကို ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်” လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုးက ပြောပါတယ်။
စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ ကရင်နီပြည်၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ ဆေရုံးအငယ်တွေကိုပြင်ဆင်ထားပြီး တိုက်နယ်ဆေးရုံတွေ မြို့နယ်ဆေးရုံတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ပစ္စည်းအစုံအလင်ထည့်ပြီးတော့ ဆေးရုံတွေဖွင့်လှစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“teaching hospital ဖြစ်အောင် ပြောင်းပြီးတော့ စာလဲသင်လို့ရအောင် ကုသမှုလည်းရအောင် ဆေးရုံဖွင့်ပွဲတွေလုပ်နေတယ်။” လို့ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက ဆက်ပြောပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ဆေးရုံတွေကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေသလို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကတော့ ဗုံးကြဲခံ ရတဲ့ ဆေးရုံတွေကို ပြုပြင်ပြီးတော့ လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ပြီး ဆေးရုံတွေပြန်ဖွင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပြင် ဆေးရုံတွေထဲမှာ ဗုံး ခိုကျင်းတွေပါ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ ဆေးရုံ ၃ ရုံ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေ တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ ဆေးရုံ ၃ ရုံတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကိုတော့ ဩစတြေး လျရောက် မြန်မာအဖွဲ့အစည်း ၃ ဖွဲ့ကနေ အလှူငွေ လက်ခံတာ၊ ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်းတာတွေ လုပ်သွားမယ်လို့လည်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ် စားလှယ်ရုံးရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
(တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း အပြည့်အစုံကို https://www.youtube.com/watch?v=_2tYLxPHDvo မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်)
Ye Kyawswa Win says:
2022-01-15 at 11:56 AM
ဆေးရုံ က နောက်မှ လုပ်ပါဆရာ….
လက်နက် ဝယ်ပါ ဆရာ
မအလ ခသခိုး တွေ မြန်မြန် ပြုတ်ဖို့ အဓိက ပါ….
2022-01-15 at 11:58 AM
အခုချိန်ထိ NUG က Metting ဘယ်လာ? 😭